Cabdiqani Qorane Cismaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxa dadka badankiisu hidde iyo dhaqan u yaqaan iyo waxa dhaqan yahay ayaa cirka iyo dhulka isu jira. Hiddaha iyo dhaqanka ma Seddex-qayd la xidho iyo timo la tidcaabaa? Ma laba go’ oo bafto ah oo midna la guntado midna garbaha laga kala ridaabaa?, Ma aqal Soomaali iyo Haamo qabo ahbaa?, Ma dhaanto iyo saylaci la boodaabaa? Run ahaantii la yaab maaha in Soomaalida badankeeda marka erayga ” dhaqan amba hidde” la soo qaado ay maankooda kusoo dhacayso inta magac ee kor ku xusan iyo wax lamid ahi. Inta aynu soo sheegnay midna hidde iyo dhaqan maaha. Qormadan yar ee …
Buugga “Kala Baro Run iyo Been”,ee uu qorey Suldaan Nayruus oo ah qoraa allifey oo qorey buugaag kale oo tiro badan, waxa uu ka koobanyay buuggu 51 bog iyo 19 ciwaan hoosaad marka laga reebo Tixraaca buugga oo uu qoraagu kaga dhigaayo 20 ciwaan hoosaad. Daabacaaddii ugu horeysay ee buugga waxa la faafiyay 2008dii, waxaana daabacdey “Yalax Print”. Dhanka habqoraalkiisu aad ayuu ufiicanyay, walow ay jiraan khaladaad dhanka kombiyuuterka ah oo dhanka qoraalka ah (typing error), qoraaga buuggana waxa aan ku ammaanayaa sida farshaxannimada leh ee uu qorey buuggan. Tusmada buugga markaad ka gudubtid waxa uu ku xigsiinayaa Mahadnaq, waxa …
Guud ahaan dunida maanta oo kale waxa laga dabbaal dagaa maalinta jaceylka adduuunka (Valentine’s Day). Inta aynaan ugalin taariikhda iyo wakhtiga ay maalintani bilaabmatey. Maxaad ka ogtahay waxyaabaha dhaca maalintan? Balse ma noqon kartaa maalin ay dad Muslim sheeganayaa udabbaal degi karaan?. Haddey uddabaal dagaanna, ma haboontey inay sameeyaan waxyaabha dadka Diinta kiristanka haystaa Sameeyaan. Ma ogtahay in maalintan 14ka Feebarweri, ay kumanaan kun oo hablood (Gashaantimo) oo caalamka ku nooli waayaan fursaddoodii Bikro nimo. Sidoo kalena Kumanaan kun oo wiil oo caalamka ahi, qaadaan xanuunada galmada la isugu gudbiyo, Sida HIV/AIDS. Ma ogtahay in maalintan ay caadi iska tahay …
Fikirku waa faldhaca qofka iyo maskaxdiisa dhexdeeda ka dhaca, waa sababta keenta inuu qofku mashquulo oo fikiro, isaga oo fooganaan iyo falanqayn ku sameeya hadba waxa maankiisa ka dhex guuxaya, isaga oo ilaaba amba aan ka war qabin si wacan, waxyaabaha ka ag dhacaya ama ka ag socda. Inkasta oo ay fikraduhu kala duwan yihiin oo uu noqon karo mid togan ama taban. Laakiin waxa is weydiin mudan maxaa laga fikirayaa? Haddana diinteennu waxa ay dhiirigalisey hab fikirka Toolmoon, Qur’aankana inbadan ayaad ku arkeysaa iyadoo ilaahay ina leeyey “Miyaaney Fikireyn” “Miyaaney Caqli lahayn”. Waxaa laga fikirayaa waxyaabo kala duwan oo …
Dalkaste amba adduunka oo dhan waxa horumar gaadhsiiyaa waa dhalinyaradiisa, muranna kama taagna in dalka hela dhalinyaro soo jeedda oo wax baratey iney mustaqbalka sii jiri doonto. Balse dalka ay dhallinyaradiisu ka tahriibto inay dhisaan daayee waxaa iska cad inaanu dalkaasi sii jireyn, hadduu sii jirana adduunka aan wax qiimo ah kulaheyn. Umaddeenna Afsoomaaliga ku hadasha waayadan dambe waxa jirta iney soo baxaan dhallinyaro jaamacado kasoo baxey oo soo dhameeyey, balse nasiib darro ay noqdaamba kuwa ugu tahriibta badan, Xaggii laga rabey inay dalkii iyo dadkii sugayey ee ay wax ubarteen aqoontii dib ugu celiyaan. Kuwii kale ee iyagu dalka …
Ha isdhiibin, Yaanu Ku Xukumin Qof Aan Aqoon Kuu Lahayn!
Cabdiqani Qorane Cismaan, January 14, 2020
Waxa uu ahaa addoon, weliba addoon madaw ah, waxaana uu addoon u ahaa nin kamid ah saldanaddii qureysheed amba raggii markaa ugu sareeyey laguna magacaabi jirey Umayah Binu Khalaf. Waxa uu addoonkani ahaa adhi-jire wuxuuna ku raaci jirey magaalada Makkah duleedkeeda. Waxa uu qaban jirey shaqooyin dhib badan oo tacaddiyo badan kala kulmi jirey, wuxuuna ahaa qofaan loo naxariisan dulmi aad ufara badanna loo geysan jirey. Balse wax walba xagga dambe ayay iska baddali doonaan. Waxa lasoo direy Nebi Muxammed (SCW). Addonkani waxa uu qaatey Diinta Islaamka ee Nebigu la yimid (SCW). Maalintaa cashar iyo nolol cusub baa u bilaabantey …
Miyiga waxaa iigu dambeysay anoo yar, markii aan caqliyeystey ayaa la iga keenay oo aan magaalada imid. Anoo ilaa 6 jir ah, laakiin lix jirkan maanta jooga ahayn, sifiican ayaan wax walba ukala garanayay. Laakiin miyiga wax saa usii fara badan kamaan aqoon. Toban sano kaddib ayaan aadey miyigii aan muddadaa dheer ka maqnaa. Waxaana igusoo dhacdey qisadan hoos ku xusan. Qisadan waxaan qorey intaan wadey qoraalka buuggayga Tilman iyo Hoggaan ee aadka u kooban. Waxaan qorey anoo fasax gaaban ku tagey miyiga aanu degno. Fasaxu wuxuu igu qaatey muddo aan dheereyn oo aad u kooban, sababo la xidhiidha fasaxa …
Sida aanu dab aan xoog badan laheyni aanu waxba u bisleyn karin, rabitaan ama doonis aan xoog badan lahaynina laguma gaadho guul qiimo leh, guul kastoo qiimo leh waxa ka dambeeyey rabitaan xooggan, rabitaanka xooggan lama hor istaagi karo. Waxa taa kuu caddaynaysa halgamaagii weynaa ee Nelson Mandela waxa uu jeel ku jiray ku dhawaad labaatan sano. Waxa loo jidh diley loogu cadaawadeeyey wixii uu waday laakiin ugu dambeyntii guushiisii qiimaha lahayd waa gaadhey. Haddaba shay walba waxa uu leeyahay wax u ah asaas, qufulku waxa uu leeyey fure, guriga waxeynu usameynay albaab laga soo galo lagana baxo, xubnehenna kala …
Noloshu waa halgan aan la garanayn natiijadeeda iyo halkay ku dhammaan doonto, nolosha waa halgan aad yeelankartid hadaf iyo rejo wanaagsan oo ku gaadhsiisa halka aad damacsan tahay. Noloshu waa halgan horumarkeeda iyo hoos u dhaceeduba aad adigu gacanta ku haysid. Noloshu waa halgan iyo halkaad is dhigtid. Haddii aad waddo wanaagsan qaadid waxaad leedahay rejo wanaagsan oo aad arki doontid najiijadeeda, haddii aad waddo qaloocaan qaadidina waa mid aad arki doontid najiijadeeda oo aan farxad gelin cidkasta oo ku jecel. Markasta ku dedaal inaad qaadid waddo wanaagsan ooo ku geyso meel wanaagsan oo if iyo Aakhiraba ku anfacda. Noloshu …
Maxaan ka ognahay saacadaha aan hurudno iyo saamaynta ay ku leedahay nolosheena, caafimaadkeena iyo maskaxdeena? Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya caafimaadka iyo hurdada? Waxaan aalaaba maqalnaa in loo baahan yahay hurdo siddeed (8) saacadood ah, habeen kasta. Haddaba halkey taladan ka timid? Cilmi baadhis laga sameeyay daafaha caalamka, oo lagu baadhayay sida cudurrada ay ugu dhacaan dadka kala duwan, ayaa la timid gebagebo la mid ah hurdada sideeda saacadood ah. Dadka wakhtiga yar hurda iyo kuwa hurdada ku daaha waxay u badan tahay in ay cudurro ku dhacaan. Laakiin ma cadda in hurdada ay tahay waxa sababa cudurrada ama calaamad …